RASMI: Arsenal Oo Shaacisay Saxeexa Xiddig Mustaqbalkiisa U Hibeeyey Emirates Stadium | Laacibnet.net
RASMI: Arsenal Oo Shaacisay Saxeexa Xiddig Mustaqbalkiisa U Hibeeyey Emirates Stadium
Arsenal ayaa si rasmi ah usoo bandhigtay heshiis cusub oo uu u saxeexay difaaceeda Rob Holding oo cimrigiisa ciyaareed u hibeeyey Gunners.
Tababare Mikel Arteta ayaa kasoo garab muuqday Holding oo saxeexaya socona illaa sannadka 2024 oo uu kula joogayo Arsenal, kaddib markii uu laacibkani wacdaro ka dhigay horyaalka Premier League xili ciyaareedkan.
Gunners ayaa dibu-habayn ku samaynaysa khadkeeda difaaca oo bishan January ay ka baxeen Saed Kolasinac iyo William Saliba oo laguba kaga tegay amaah, laakiin ay jiraan ciyaartooyo kale oo la hadal hayo inay iyaguna dariqaas marayaan.
Holding ayaa isfaham wanaagsan la samaystay Pablo Mari iyo Gabriel Magalhaes oo uu labadoodaba si wanaagsan ula shaqaynayay toddobaadyadii ugu dambeeyey.
Tababaraha reer Spain oo sharraxay heshiiskan ayaa yidhi: “Tan iyo markii aan bilaabay tababarenimada Arsenal, waxa aan si weyn ula dhacsanaa sida uu kooxda qaybta uga yahay Rob Holding gudaha iyo bannaanka garoonkaba.
“Tayada shaqadiisa maalin walba ee garoomada tababarka ayaa heersare ah, waxaanu taas si joogto ah oo sarraysa ugu soo bandhigaa garoonka.
“Dhamaanteen waynu ognahay tayada Rob, taas oo uu inagu tusiyey bandhiggiisii kulamadii adkaa ee labada guulood ee Finalka FA Cup.
“Dhamaanteen aad ayaanu ugu faraxsanahayheshiiska cusub ee Rob uu saxeexay, waa ciyaartoy u dhow dhamaan ciyaartoyda iyo shaqaalahaba, waxaananu rajaynaynaa inuu sii wadi doono korriinka sannadaha soo socda.”
Agaasimaha farsamada Arsenal ee Edu ayaa isaguna ka hadlay heshiiska uu Holding saxeexay, waxaanu sheegay inuu yahay ciyaartoy 25 ah oo heerkiisa ciyaareed ee ugu sarreeya gaadhi doona sannadaha soo socda oo muhiim u noqonaya.
Arsenal Oo U Dhaqaaqeysa Bedelka Mesut Ozil Bishaan Janaayo & Jawaab Lama Filaan Ah Oo Ay La Kulmeen
PSG Iyo Juventus Oo Xiddig Arsenal Ah Ku Tartamaya, Qorshaha PSG Ee Messi & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
HESHIIS DHAN: Saxeexa David Alaba Oo Lagu Kala Calaf-Qaaday & Mida Uu Tijaabada Caafimaadka U Maray Real Madrid Iyo Liverpool